आमिर खानले किन छाडे सामाजिक सञ्जाल ? Canada Nepal
आमिर खानले किन छाडे सामाजिक सञ्जाल ?
काठमाडौं - बलिउडका चर्चित अभिनेता आमिर खान सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहने भएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममामार्फत आमिरले यसबारे जानकारी गराएका छन् ।
इन्स्टाग्राममा आफुलाई जन्मदिनको शुभकामना दिने प्रशंसक र शुभेच्छुकहरुलाई धन्यवाद दिँदै उनले यो आफ्नो अन्तिम पोस्ट भएको बताएका छन् । उनले आफु काममा सक्रिय हुनको लागि मोबाइल पनि छाड्ने बताएका छन् ।
उनको फिल्म र अन्य बिषयमा जानकारीको लागि आमिर खान प्रोडक्सनले नयाँ ट्वीटर ह्यान्डल लन्च गरेको बताइएको छ ।
चैत्र ३, २०७७ मंगलवार १२:४७:४३ बजे : प्रकाशित